GNOME: Chii icho uye inoiswa sei pane DEBIAN 10 uye MX-Linux 19? | Kubva kuLinux
GNOME: Chii icho uye inoiswa sei pane DEBIAN 10 uye MX-Linux 19?
Semazuva ese, isu tinogara tichitaura nezvezvazvino nhau kubva GNOME (3.36, 3,34, 3.32, 3.30, pakati pevamwe), yavo kuwedzera kana nezvevamwe hunhu o native app kunyanya.
Mune ino post isu tichaisa pfungwa kunyanya pa Chii chinonzi GNOME? y GNOME yakaiswa sei?. Uye zvechokwadi, uchitarisa pane izvozvi Metadistribution (Amai Kugovera) DEBIAN GNU / Linux, iri parizvino iri 10 shanduro, kodhi zita Buster. Izvo zvino izvo zvinoshanda sehwaro hwe MX-Linux 19 (Yakashata Duckling).
GNOME ndomumwe wevamwe vazhinji Nzvimbo dzeDesktop (DE) izvo zvinoita hupenyu paari GNU / Linux Inoshanda Sisitimu. Uye mune akawanda aripo Kugoverwa kwave kuri kana kuri iyo Desktop Nzvimbo default (default).
Izvo zvakakosha kuyeuka kuti, a Desktop Nzvimbo es:
"… Seti ye software yekupa mushandisi wekombuta kushamwaridzana uye kugadzikana kudyidzana. Iko kuitiswa kweiyo Graphical Mushandisi Yemukati iyo inopa yekuwana uye yekumisikidza zvivakwa, senge maturabha uye kusanganisa pakati pezvishandiso zvine hunyanzvi sekukweva uye kudonhedza.". Wikipedia
Uye imwe Graphical Mushandisi Yekushandisa (GUI) es:
"… Chirongwa chemakomputa chinoshanda sevashandisi, chinoshandisa seti yemifananidzo nezvinhu zvinojekesa kumiririra ruzivo nezviito zviripo pane inoonekwa. Iko kushandiswa kwayo kukuru kupa nyore kuona nzvimbo yekutendera kubvumidza kutaurirana neiyo Inoshanda System yemuchina kana komputa". Wikipedia
1 Zvese nezveGNOME
Akaburitswa musi we 3 March we1999 uye parizvino iri Desktop Nzvimbo yakagadzirirwa kubatwa nyore uye zvepamusoro pane chero Kugoverwa kweGNU / Linux kuiswa paComputer, ndiko kuti, kufambisa mashandisirwo uye kugona kweese mashandiro, maficha uye mashandisirwo ayo anouita, uye nevamwe vanoikomberedza mukati me Operating system. Kana nemamwe mazwi, ipa nyore, nyore kuwana uye kuvimbika kune vashandisi.
Zita rako (GNOME) is "GNU Network Object Model Nharaunda". Iyo yakaumbwa zvachose nechena Yemahara Software uye Yakavhurwa Sosi (Free uye Vhura Source Software - FOSS).
Icho chikamu che GNOME chirongwa zvinoenderana ne GNOME Nheyo. Uye yakavakirwa pane iro rekushandisa GTK+.
Iyo inogadziriswa uye inoshandisa iyo X Window Sisitimu inoratidza server, kunyangwe parizvino iri kuvandudza kusangana kwayo ne Wayland uye nekudaro kusimudzira maficha akadai seinetic scrolling, kudhonza uye kudonha, uye yepakati bhatani kubaya.
Pakati pehunhu hwakamira parizvino ndehwehwo Start bhatani uye iyo Main menu yekushandisa uye sarudzo. Iye Start bhatani inonzi "Mabasa" uye inowanikwa nekutadza mukona yekumusoro kuruboshwe kwechiratidziri uye inokutendera kuti uchinje pakati penzvimbo dzekushandira nemawindows. Uye kuoneka kwazvino nekugadziriswa kunoratidzwa mumufananidzo wepamusoro wepamusoro.
Iyo yazvino vhezheni vhezheni yeiyo GNOME Desktop Nzvimbo iri vhezheni nhamba 3.34.
Basa rakanaka rebasa uye rutsigiro rwakasimba rwesangano.
Nharaunda yakakura yevashandisi uye vanopa.
Yakareba uye yakanakisa nhoroondo trajectory.
Zvakaringana uye zvakakwana zvinyorwa.
Huge uye yakasimba ecosystem yezvishandiso.
Iyo yazvino vhezheni (GNOME 3) inoshandisa yakawanda Zviwanikwa (RAM / CPU) ichienzaniswa neakawanda.
Iyo yakasungirirwa zvakanyanya kune kushandiswa kweSystemd.
Kuwedzeredza zviri pamutemo
Chii chitsva mushanduro yazvino yakagadzikana yevashandisi
Chii chitsva mukuburitswa kwakatsiga kwevagadziri
DEBIAN webhu paGNOME
Sarudza iyo GNOME Desktop Nzvimbo uye chero chimwe chinhu chinoshandiswa kana seti yemamwe mapakeji.
Dzorera uye pinda mukati nekusarudza iyo GNOME Desktop Nzvimbo, kuitira kuve neanopfuura imwe Desktop Nzvimbo yakaiswa uye isina kusarudza iyo GDM3 Login Maneja.
Cherechedza: Mushure mekuyedza iyo GNOME Desktop Nzvimbo yakaiswa unogona kuisa iyo yekuwedzera maapplication emuno uye anodikanwa plugins zvakafanana, senge, semuenzaniso:
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" nezvake «Entorno de Escritorio» anozivikanwa nezita rekuti «GNOME», imwe yeanonyanya kushandiswa nhasi munyika ye «Distribuciones GNU/Linux», ive yekunakidzwa uye yekushandisa, yeiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » GNOME: Chii icho uye inoiswa sei pane DEBIAN 10 uye MX-Linux 19?
Izvi zvinotaridzika zvakanyanya seGnome monograph pane yekuisa bhuku.
Gnome inouya seye default desktop muDebian, uye iri nyore kudzoka-kumashure.
Dambudziko hombe rinosangana nemushandisi mutsva nderekuti vanoda isina-yemahara firmware, inozokurudzirwa mune yekumisikidza yekurodha kunze.
Kwaziso Autopilot! Ndatenda nekutaura kwako. Zvirokwazvo kunyangwe chinyorwa ichi chiri chidiki, chakanyatso kukwana kuti ive nzvimbo yakanaka yekutanga kune avo vanobva mukutanga muLinux nenzvimbo dzayo dzeDesktop, uye mune ino kesi, GNOME. Zvakare, ndiyo yekutanga mune akateedzana nezve ese maGNU / Linux Desktop Enzvimbo. Isu tichaburitsa iyo yeKDE / Plasma munguva pfupi.
Iyo nyowani vhezheni yeLinux Kernel 5.5 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Nyora iyo nyowani vhezheni Solus 4.1 ine Kernel 5.4 uye nezvimwe